သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် နှစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် နှစ်
သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် နှစ်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 21, 2012 in Creative Writing | 27 comments
သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် တစ်ကို ဖတ်ရှုလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ …
စကားမစပ် .. အဲလေ .. ခုပို့စ်နဲ့ မစပ် ..
အောက်က ဟာလေးဂို တင်လိုက်ပါဒယ် …
ကြီးကြီး ကြည့်ချင်ရင် ပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဦးမင်းသာ သည်နေ့ ခေတ်မှာဆိုရင် ပလက်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်ပြီး မှဲ့ ရော အမာရွတ်ပါ ပျောက်နေလောက်ပြီ နော ။ ဥမပါ ကိုရီးယားမင်းသားပုံစံပြောင်းထားတဲ့ အံကြီး လို ပေါ့
အဲ့ဒီ အံကြီး ဆိုတဲ့ လူက
နဂိုချော ဆိုပဲဗျ …
တောင်မလေးဒွေ ဝိုင်းဝိုင်းနေတာလည်း လွန်ရောဆိုပဲ ..
ဟုတ် .. အရီး
နောက်တစ်ပင်တော့ ထပ်လိမ်ဦးမယ်နော် ..
သုံးပင်လိမ် ဆိုတော့လေ ..
အဲ့ထက်တော့ ပိုဘာဘူးလို့ ..
တော်တော်နောက်တဲ့ လေးထောင့်တုံး.. :harr:
ဟိုတစ်နေ့က တစ် တင်တယ် ..
မနေ့က ခုဟာ တင်ဒယ် ..
ခညားဂျီးက ဒါတောင် မေ့နေဒယ်ဒဲ့ ..
သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် ပုံ၃ကို.. :harr:
မြန်မြန် ရေးနေဘာဒယ် ခည
ခုလို တခုတ်တရ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ ခည ..
ဟုတ် အမ ..
ခုလို အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးဘာနော့ ..
ပြီးရင်ပုံနှိတ်ထုတ်ဝေဖို့ ကြိုးစားကြည့် 
မင်းမြတ်သူရ လည်း မောင်ရင့် ထက်ပိုမကောင်းလှဘူး
ဟို .. မရွှေကြည်ပေးထားတဲ့ နာမည်တောင် သတိရလိုက်မိသေး .
ဘာတဲ့ .. အံစာသိင်္ခသူရ ဆိုပဲ ..
ခုလို အားပေးပြောကြားတာ ကျေးဇူးပါ ဦးဆာမိ ခင်ဗျာ ..
ရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိပါရဲ့ဗျာ ..
သို့ပေမယ့် .. သို့ပေမယ့် ပေါ့ဗျာ …
ကျုပ်တနေ့ ကြုံရင် စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ 
ဇတ်လမ်းစဉ်ကြည့် ပေါ့။
ကြုံရင် လုပ်နေနဲ့ဗျာ ..
ခုဘဲ ပြောပြ ..
ကျုပ် ကာကာ တိုက်ပါ့မယ် ..
တော်သေးတာပေ့ါ … ဘ၀တ်ဖြူဆိုတဲ့လူက ဘုရားကိုသိုက်မတူးသွားတာ …. ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေက ကိုလိုနီခေတ်ကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပဲနော် …. နောက်တပုဒ်ဆိုပြီးပြီမှတ်လား ကိုကြီးအံ …. :chee:
နောက်တစ်ပုဒ်ဆို ပီးဘာဘီဗျာ ..
လာမည့်ပို့စ်မှာ အစ/အဆုံး အကုန် တင်ပေးသွားပါမယ်လို့ …
နာတော့ ဘီအီး ဘီယာ ၀ီစကီ သုံးပင်လိမ်လိုက်တာ ခုထိ ခေါင်းကိုက်တုန်း
ပင်လယ်ဓားပြတွေရော ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်တွေရော ပါလာပြီ … နောက်တပိုင်းဆို ဘိုးတော်တွေပါ လာတော့မယ်
နောက်တလိမ် …နောက်တစ်လိမ် …
အခုမှပဲ.. လိမ်မိတောတ့တယ် ။
ကျွန်တော်တော့လိမ်စရာမရှိလို့ ကိုယ့်လက်ကိုယ်လိမ်ချိုးလိုက်တယ် “ဖျောက်”
ဟေးးးး…..ဇာတ်သိမ်းပိုင်းဆိုရင် ”သိကြားပုလင်း” နဲ့ ရဲတွေလာတော့မယ်ကွ..ကျော်ချာကြီး…
နောက်တစ်လိမ်မှာ အစ အဆုံးတင်တော့မှ အားရပါးရ ဖတ်ရတော့မယ်…
သုံးလွန်းတင်မှကြိုး တဲ့ ….
နောက်တပိုင်းမှာတော့ ထပ်မပျောက်တန်ရာ.. :hee: